Ndege yekutanga ye100% yemauto eAfrica - Afrikhepri Fondation
Chishanu, Gunyana 17, 2021
Ndeye ndege yeuto yeAfrica 100
Kuverenga: 2 mins
Lndege yekutanga-yemu Africa yakasimuka musi wa Nyamavhuvhu 13 muSouth Africa. Ndege, yerudzi rwemauto, ichave yakatariswa kumatenga uye mutengo wayo wekutengesa unotarisirwa kusvika kumadhora gumi. Musi waAugust 13, 2014 na7 mangwanani, yekutanga 100% ndege yeAfrica yakasimuka kubva patara paWonderboom Airport muPretoria. Ndege diki, inonzi AHRLAC (High Performance Reconnaissance Mwenje Ndege) ine dhizaini dhizaini yakafanana nehutachiona hukuru uye inogona kutakura mutyairi pamwe chete nemutakurwi. Ndege yemhando yemauto yakatsaurirwa kumatongerwo enyika.
Ichagona kuita mishando yekudzivirira uye kutonga kwezvakasikwa, njodzi dzemhoteredzo, kutonga kwemiganhu, kuchengetedzwa kwemukati, maritime, kungwara. Yekutanga prototype inotanga kuedzwa yekuita nendege, isati yashongedzwa nemauto ane anozoongororwa.
Vashandi vemuAfrica vane 60 vave vachishanda mukugadzirwa kwayo nekugadzira kubvira 2011.
A South African 100 project
Iyo ndege yakanyatsogadzirwa, kuvandudzwa uye kuunganidzwa muSouth Africa, chibereko chekubatana pakati peParamount, yekutanga boka rekudzivirira erudzi rwemuraraungu, uye Aerosud, wepanzvimbo aeronautical subcontractor. Hapana asingasviki makumi matanhatu eAfrica mainjiniya akashanda mukugadzirwa kwayo uye kugadzira kubvira 60, iro zuva rekutanga chirongwa, paine zera repakati reboka rerojekiti yemakore makumi matatu nemasere chete.
Magadzirirwo akaitwa zvikamu zvacho aive edigital zvachose, aine kukosha kwekuunganidzwa pasina kutambisa, senge mutambo uri nyore wemakanika, mumaawa mashoma. Muto uye michina yakagadziridzwa uye yakagadzirwa neParamendi muSouth Africa kuti ikwanise kuburitsa simbi uye nhengo dzayo ndege nekukurumidza sezvinobvira.
Chikamu chemutengo wemamirioni gumi emamiriyoni
Kuvandudzwa kweAHRLAC kunofanirwa kuita madhora angangoita mazana maviri emamiriyoni emadhora kumafemu eSouth Africa, nemutengo wekutengesa wakakomberedza mamirioni gumi emadhora kopi. Sekureva kwa Paramount, ndege iyi inofarira nyika dzinoverengeka dzeNATO uye nyika dzichiri kusimukira, kunyanya nekuda kwemutengo wakaderera pane aripo mapuratifomu ekuongorora emuchadenga.
Vatengesi vatema nemasayendisiti: Yechitatu edition
Tenga € 23,99
Yakapedzisira kugadziridzwa munaGunyana 16, 2021 5:08 am
Kantanka, ane 4X4 motokari yakagadzirwa nevaAfrica
Innocent Chukwuma anogadzira mota zvachose "dzakagadzirwa muNigeria"
Tarira Muchato weGore (2014)